INONA no hitanao eto? Eny, tafika iray mitaingina soavaly fotsy. Nefa mariho ny toerana iaviany. Ireo soavaly dia midina avy any an-danitra eny amin’ny rahona! Moa ve tena soavaly any an-danitra ireo?
I Jesosy no hitarika izany ady ao Hara-magedona izany. Tadidio fa i Jesosy no nofidin’i Jehovah mba ho mpanjakan’ny fitondram-panjakany. Izany no antony itondrany satroboninahitry ny mpanjaka. Ary ny sabatra dia mampiseho fa hamono ny fahavalon’Andriamanitra rehetra izy. Tokony ho gaga va isika satria handringana ny olona ratsy rehetra Andriamanitra?
Avadiho mankao amin’ny Tantara Faha-33 ange. Jereo izay mitranga amin’ny soavaly sy ny kalesy fiadian’ny Ejipsianina. Iza no nahatonga ny rano hanafotra azy ireo? I Jehovah. Nataony izany mba hiarovana ny olony. Jereo ny Tantara Faha-76. Ho hitanao eto fa i Jehovah dia namela mihitsy ny Israelita olony hiharan’ny fandringanana, noho ny faharatsian’izy ireo.
Koa tsy tokony ho gaga àry isika raha haniraka ny tafiny any an-danitra i Jehovah mba hamarana ny faharatsiana rehetra eto an-tany. Nefa hevero ange izay ambaran’izany e! Avadiho ny pejy ary aoka hojerentsika.
Hizara Hizara Ny Faran’ny Faharatsiana Rehetra
my tant. 114